KAIST - Fianarana ambony ao amin'ny oniversite ambony Korea Atsimo
Firenena : Korea Atsimo
City : Daejeon
fanafohezan-teny : KAIST
Créé : 1971
mpianatra (eo ho eo.) : 11000
Aza adino ny miresaka momba KAIST
Misoratra anarana ao amin'ny KAIST
Mendri-kaja Guests, Filoha Myung Oh; Mpitandrim-pananana Gil-Saeng Chung sy Sam-Soo Pyo; Filoha teo aloha ela-Dal Choi sy Chang-Sun Hong; mpikambana taloha tao amin'ny Antenimieram-Pirenena, Mr. Yong-Kyung Lee; Filoha Dae-Im Kang ny Fikambanan'ny lohan'ny S&T Fikambanana sy ny mpikambana ao filohan'ny – Ny Filoha Young-Myung Choi ny Korea Institute ny Nokleary Nonproliferation sy ny Fanaraha-maso, Ny Filoha Young-Joon Kim ny Gwangju Institute Siansa sy ny Teknolojia; ary Ms. Soo-Young Lee, ny filohan'ny KAIST Development Foundation, izay tsy hiantra ny hery amin'ny asa ho an'ny KAIST miaraka Mr. Eung-Sun Lee, ny Vice seza ny Foundation, Filoha Lefitra Hang-Ku Chung ny KAIST Fanohanana School Association, Filoha Kwi-Roh Lee ao amin'ny National Center FABRICATION Nano, Filoha Doo-chul Kim ny Korea Institute of Advanced Sciences, Profesora Jang-Hyuk Kwon, ny talen'ny Korea Science Academy, niavaka sampam-pianarana sy ny mpiasa, ny kilasy 2017, niverina mpianatra, Alumni, ray aman-dreny, havako sy ny namako, ary farany ny vadiko Myoung A (ny) Kang, Tena amim-pahatsorana aho misaotra anao noho ny maha eto fa ny fiandohan'ny faha-15 KAIST fiadidian'ny.
Ho ahy mba ho eto amin'izao fotoana izao dia irery heviny sy mitondra ny fahatsiarovana maro avy amin'ny lasa. Dimam-polo taona katroka lasa izay, in Janoary ny 1963, Aho in miaramila fiofanana ho toy ny vaovao ny 111th enlistee kilasy (111 olona) ny Koreana Air Force eto in Yuseong. Aho nandritra ny roa volana tany nandritra ny fiofanana ara-miaramila fototra, ary 9 -bolana ho an'ny fampiofanana ara-teknika eo amin'ny fitaovana elektronika fifandraisana fanompoana. Ny volana Janoary dia mafy mangatsiaka amin'ny mari-pana ny -20 degre Celsius - nisy izany nangatsiaka ny marina fa ny Incheon helo-drano dia malalaka. Tamin'ny volana Novambra aho avy eo nafindra tany amin'ny Air Force base in Kangneung, Kangwon-Do. Tsaroako fa araka izay efa niandry tao Osan ny fiaramanidina ho Kangneung, Dia reko ny vaovao mampalahelo fa ny Filoha John F. Kennedy voatifitra ho faty any Dallas, Texas, izay tena manafintohina.
In 2002, Aho, dia nitsidika mpampianatra momba ny KAIST sy nandritra ny fahavaratra teo aho dia nanana fahafinaretana ny mijery baolina kitra ny ekipa Koreana National tonga avy any aoriana mba nahatratra ny mahery vaika ekipa Italiana 2:1. Hatramin'izao, Tsaroako mazava tsara ireo tanjona roa miavaka baolina ny ekipa Koreana, ary ny fahatsapana fireharehana sy ny fanantenana-pirenena.
ankehitriny, I hiverina any Yuseong mba hanompo ho toy ny filohan'ny KAIST vaovao. Izy io dia voninahitra lehibe, fa ny asa mba hitondra ny zava-dehibe dia ny firenena sy ny fanamby amin'ny fomba maro.
KAIST dia naorina teo an 1971 sy ny mpanorina tanjona, araka ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana KAIST lahatsoratra 1, voalohany, ny hanabe sy Foster tampon'ny-sidina ho avy amin'ny mpahay siansa fitaovana henjana teoria fototra sy ny fahaizany ho azo ampiharina fampiharana; faharoa, mba hanatanteraka na maharitra sy ao anatin'ny fotoana fohy, ary nampihatra fikarohana fototra izay manampy ny firenena ny paikady teknolojia fandrosoana; ary fahatelo, mba hanome fikarohana fiarahamiasa miaraka amin'ny dobo ny fikarohana samihafa andrim-panjakana sy ny orinasa
Teo ambany faneva KAIST toy izany no nitarika ny fitomboan'ny ny siansa sy ny teknolojia orinasa any Korea ny lasa 40 taona ny fananganana sy, Lasa ekena eran oniversite miavaka fikarohana, noho ny miavaka sampam-pianarana sy ny mpiasa nanolo-tena ho tsara ny fikarohana sy ny fanabeazana ny hoavy mpitarika. Fankasitrahana lalina ihany koa noho ny teo alohany, Dr. Nam Pyo Suh sy ireo filoha teo aloha sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa ara-panjakana, izay efa niasa miaraka aminy.
ankehitriny, KAIST maro nahazo diplaoma manao malaza fandraisana anjara araka izay miavaka mpampianatra ao amin'ny fampianarana ambony sy ny asan'ny mpisava lalana mpikaroka ao amin'ny siansa sy ny injeniera saha.
Vao herinandro lasa izay, mivady Nasaina ho any amin'ny KAIST fandraisana Alumni amin'ny Iraisam-pirenena Ny ventin-panjakana faritra Conference (ISSCC) in San Francisco, izay nanatrika ny maro KAIST Alumni, amin'izao fotoana izao ny mpianatra sy ny mpampianatra, ary vahiny. Nianatra aho fa ity taona ity indray mandeha indray, KAIST nanolotra ny taratasy indrindra tao ISSCC izay ny fitsipika fisotroana ny fanekena dia tena avo. Izany no iray monja mampiseho bebe kokoa ny fomba KAIST dia mahatratra avo vaovao. Ny KAIST sampam-pianarana sy ny mpianatra efa namoaka taratasy maro isan-karazany eran-gazety hajaina toy ny Natiora sy ny Siansa.
KAIST dia tsy maintsy manohy mandeha ambony sy mihoatra noho ireo zava-bita voalohany, ary KAIST tsy maintsy ho mahery vaika maotera ho an'ny toe-karena sy ny orinasa fampandrosoana ny Korea. Tahaka ny firenena tsy ampy farihy lalina ny harena voajanahary, Korea dia tsy maintsy mahita fomba vaovao mba hifaninana eran mba hiantohana ny fanambinana sy ny tsara-fisian 'ny mponina ao aminy. KAIST dia tsy maintsy manao ny tsara indrindra mba hitarika ny firenena ho any amin'ny sisin-tanin'i siansa sy ny teknolojia amin'ny hafanam-po sy ny andraikitra.
Amin'ny andro ho avy, KAIST dia tokony hitombo ho hazo lehibe eo amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fanabeazana, itokisana sy nohajaina tsy tany Korea, fa manerana izao tontolo izao. Nanomboka avy any amin'ny saikinosy koreanina, ny fakany dia tokony span mihoatra sisintany-pirenena, mandeha eny ambonin'ny ranomasina ny maro dimy kaontinanta nakarina tao amin'ny manan-karena sy maro karazana napetraka ny izao tontolo izao-kilasy sy ny zava-baovao hevitra hamokatra ny vokatra - tsara-voaomana nahazo diplaoma izay ho hajaina mpitarika sy ny mpandray anjara amin'ny fiaraha-monina.
A eran-mifandray fanabeazana dia tena ilaina amin'ny fitomboan'ny izao ny varotra afaka ny mandroso aterineto, supersonic fiaramanidina, ary supersize sambo. KAIST nahazo diplaoma dia tsy maintsy ho tombany toy ny fanavaozana amin'ny in-lalina ny fahalalana, famoronana, fahaizany ho an'ny Aza Tia Tena mafy sy mazava ny fifandraisana amin'ny hakingana miteny amin'ny fiteny. Ary na taiza na taiza izy ireo handeha, dia afaka manohy ny dia namelatra ny fitsipika, soatoavina, fahaiza-manao sy ny fahalalana, ary avy fa afaka rehetra dia jereo ny KAIST hamony ny hazo maneran-tany.
Ny tanjona farany ny siansa, teknolojia sy ny fitantanana mifototra amin 'ny hahasoa ny fiaraha-monina. Ary izao-panahy dia tsy maintsy ho antoka ao amin'ny oniversite toy ny trano fianarana, akaikiny faritra, ny firenena sy izao tontolo izao.
Ao ny ezaka mba hahazoana izany hahasoa ny fiaraha-monina, KAIST efa nijaly fambolena fanaintainana manoloana ny fitomboana miavaka. Tsy maintsy manamaivana ny fanaintainana amin'ny alalan'ny fahatokiana sy ny fiheverana ny hafa, ary hiaraka amin'ny firaisan-kina mba handray ny dingana mankany amin'ny mamirapiratra rahampitso ny KAIST. I manetry tena ka mitady ny fanampiana, sy ho antoky ny naninjitra ny ezaka rehetra azontsika atao ho toy ny mpanompo mpitarika.
Mety fantatrao ny sarimihetsika antsoina hoe "The Mission". Ao amin'io horonantsary, ny mpikarama an'ady sy ny mpivarotra andevo nilalao ny Robert De Niro mihetsiketsika eny avy amin'ny fiainana mikorontana mba hanaraka ny manetry tena zezoita mpisorona sy manomboka ny ainy indray. Tamin'ny sehatra iray, De Niro ary ny mpisorona dia nihanika ny amin'ny hantsana riandrano hantsana. Ary rehefa vita ny sarotra indrindra climb, mitondra aminy tena mavesatra ny entana ho toy ny asa fivalozana noho ny fahotany, izy ireo niarahaba ny vondrona teratany Indiana, izay tapaka ny entana ka nandatsaka azy ny hantsana. Na dia tsy nipetraka mora tamin'i De Niro mba namoy ny indray mandeha lanja ny entana, ny enta-mavesatra dia asandratra avy amin'ny olona rehetra, ary ny ainy mbola handroso.
Hanokatra vaovao toko, KAIST tsy maintsy hiezaka mafy toy izany herim-po. Fa tsy hifamaly sy ny fanomezan-tsiny ny olona ho lasa ratsy, KAIST dia tsy maintsy miaraka mifantoka amin'ny ho avy sy hanao ny rehetra azonao atao mba hanatanteraka ny asa manan-danja ho avy. Ary tsy maintsy mifanampy ny fanafahana antsika amin'ny tanan'ny ireo zavatra izay hahatonga ny dia sy ny asa fitoriana ary tsy amin'antony Nanjombona sarotra. Mivady eto mba hiasa aminareo ho fampaherezana kosa, KAIST noho ny firenena dreniny.
Ny tara mpitarika ara-panahy Mahatma Gandhi dia nampitandrina azy ireo fahotana lehibe fito. Anisan'izany ny tena manan-danja ho KAIST dia 'siansa tsy misy feon'ny fieritreretana,'' Ny fahalalana tsy misy toetra,'' Politika tsy misy fitsipika,'Ary' ny fivavahana tsy sorona. 'Tsy maintsy miezaka mba hampiroboroboana ny siansa, fahalalana, sy ny toetrany amin'ny fieritreretana madio, tsy mety manaiky lembenana fitsipika sy vonona sorona.
KAIST, mba ho mpitarika sy mandray anjara amin'ny siansa, teknolojia sy ny indostria fampandrosoana, dia tsy maintsy manao tsara any amin'ny faritra dimy ireto - samy nanamafy ny fampiasana ny dimy taratasy eo amin'ny andrim-panjakana ny anaran.
Voalohany, "K" dia ho an'ny fahalalana zavaboary. Faculty mpikambana sy ny mpianatra ho sahy ho any ny asan'ny mpisava lalana fikarohana mba hamorona ny fahalalana sy ny teknolojia vaovao. KAIST no tena miasa amin'ny foibe fikarohana ao an-toerana ao amin'ny Daedeok Industrial Park sy ny toerana hafa, ary ny iraisam-pirenena miaraka amin'ny olon-kafa eran-tany anisan'izany ireo ao amin'ny Silicon Valley. High-zava-dehibe ny fahalalana ny famoronana izao tontolo izao matetika no mitaky-kilasy fotodrafitrasa sy ny manohana tontolo iainana. Isika dia hanao ny tsara indrindra mba hampiroboroboana ny fanohanana sy ny firotsahana mavitrika avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpitarika ny fikambanana.
Lahateny efitrano sy ny profesora 'fikarohana laboratoara no loharanom-baovao fahalalana famoronana. Ao amin'ny mpianatra mifantoka sy ny fahaizan-nitondra fikarohana fandaharana, nahatonga mafy- miasa ireo mpianatra, na diplaoma ary ny undergraduate, Tena afaka mandray soa avy amin'ny samy hafa sy ny fahafahana tsy manam-paharoa. However, tsy ny rehetra mamokatra mpikaroka dia mahitsy A mpianatra. Tsaroako niavaka mpikaroka ao amin'ny University of California, Berkeley fony aho mpianatra nahazo diplaoma. Izy fikarohana zava-dehibe, ary izy nandritra ny andro sy alina ao amin'ny laboratoara Nitarika fanandramana. Izy dia mbola ho amin'ny misasakalina ny dabilio, na dia ny fandinihana dia mba homena ny ampitso maraina. Tsy mahazo izay rehetra, fa amin'ny fahalalana zavaboary, dia faharoa ny tsy. Tsy ela taorian'ny fizarana diplaoma dia nanomboka velively mampitolagaga izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fikarohana maro breakthroughs. KAIST dia tsy maintsy manome lanja, ary manohana izany talenta, raha tsy izany dia very pirenena.
Interdisciplinary fikarohana dia mamporisika ny fitrandrahana ny faritra untraveled vatosoa maro izay mety ho hita. Ao amin'ny fikarohana oniversite, olona akademika sampan-draharaha foibe dia tokony ho ny tsara. Azo ampitahaina amin'ny tontolo tonga lafatra, na ny baolina. However, raha ny fahalalana ny KAIST toerana dia mba ho feno bola ihany, avy eo 48% ny toerana iray manontolo dia mitoetra unfilled, dia ny toerana mba hijery ny earthshaking fikarohana.
Interdisciplinary fikarohana ho an'ny sampam-pianarana miantso mpikambana avy amin'ny fianarana ambony departemanta mba hiara-miasa akaiky amin'ny alalan'ny fandikana rindrina sy fandresena nanahirana. Sarin-javatra eo amin'ny fidirana Efitrano Bell Labs, Murray Hill, New Jersey dia ny fampianarana ny Alexander Graham Bell, izay mangataka ny hitsidika ny mbola tsy fantatra i faritany mba hahita zava-baovao.
KAIST mila mandrakariva hampiroboroboana sy fanohanana mpikaroka mba handray anjara amin'ny fandaharam interdisciplinary fikarohana ao amin'ny toeram-pampianarana toy ny KAIST Institute sy ny hafa amin'ny faharesen-dahatra sy ny hafanam-po.
Faharoa, "A" dia ho an'ny fandrosoana eo amin'ny lafiny rehetra. Janoary 30, Nara-ho dia soa aman-tsara natomboka mba asio boribory ny izao tontolo izao, mba hanangona ary mamindra vaovao izay hitondra soa ho an'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Ary toy ny Nara-ho, KAIST dia tokony hanomboka ny tenany ho ambony kokoa Altitude mba hahatonga ny izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa.
Mba ho maneran nitarika institiota, KAIST dia tsy maintsy manao ny tsara indrindra mba hahazoana fanohanana ilaina na fitondran-tena, ary ara-bola. Rehetra dia tsy maintsy mpikambana ao amin'ny KAIST azo hozongozonina manana finoana fa ny zavatra rehetra azo atao tsara kokoa, fa ny zava-baovao mety ho hita ny fomba ary fa azo ovana. Fahazarana tsara tokony hihaviana hanaovana ary zatra mitsahatra. KAIST koa mahita fomba hanatsarana ny fahaiza-miasa mahomby amin'ny ankapobeny.
KAIST dia tsy maintsy mahita fomba hanatanjaka fiarahamiasa amin'ny Institute for Basic Siansa sy ny foibe fikarohana maro ao amin'ny Daedeok Industrial Park. Efa fantatra tsara fa ny fahombiazan'ny Silicon Valley no hinged ny fikarohana sy ny fanabeazana ny manodidina anjerimanontolo toy ny Stanford, Berkeley, ary San Jose State. Dean Frederick Terman ny Stanford University nampahery sy nanampy William Hewlett sy David Packard mba hamoronana ny Hewlett-Packard Company.
Ny hoavy rafitra ny KAIST ilaina remade amin'ny fifampidinihana amin'ny rehetra ny mpifidy sy ny Filankevi-pitantanan'ny. Co-tompon'ny rafitra toy izany dia azo tonga mpitaiza, Notohanana sy tonga saina ny fandraisana anjara feno ny rehetra.
Fahatelo, "I" mijoro ny tsy fivadihana. Ny tsy fivadihan'ny KAIST dia azo antoka ny tsy tapaka mandanjalanja tsara eo amin'ny teoria sy ny fampiharana, fahafahana sy ny foto-kevitra, fanaovana ny marina sy ny Aza Tia Tena, sy ny lanjany ary ny asa. Tsy fivadihana dia tsy maintsy ho tombany, ary mpanao fikarohana boky sy gazety rehetra, fitantanana ara-bola, ary ny fifandraisana amin'olona.
Taona maro lasa izay dia nanatrika ny fihaonambe iraisam-pirenena tany Kos Island, Gresy. Nandritra ilay dia aho, nianatra bebe kokoa momba ny fototry ny tsy mivadika amin'ny alalan'ny tantara iray malaza. Araka ny tantara, ny mpanao sary sokitra no nirahina mba hamokatra ny bust ny fahatsiarovana ny malala mahery fo. Kanefa dia naka ela loatra sy ny olona miandraikitra ny tetikasa nitsidika ny mpanao sary sokitra, ary nanontany hoe nahoana ny vokatra tsy afaka ho voavonjy avy hatrany. Ho azy izany niseho tamin'i hatao, fa hoy ny mpanao sokitra nilainy fotoana bebe kokoa ny famitana ny ankoatry. Izay tezitra ny vahiny nanontany izay te hikarakara ny hahita ny ankoatry. Ny mpanao sokitra ny valiny dia, "Ny nanaja mahita tany ankoatry andriamanitra."
Mino aho fa misy olona na fikambanana amin'ny tsy fivadihana dia afaka hiaritra ka hitsangana eo ny fitsapana ny fotoana. Tsy fivadihana dia tokony ho hatsaran-toetra ny KAIST.
Fahefatra, "S" dia ho an'ny fampandrosoana maharitra. Fampianarana sy ny fikarohana ao amin'ny KAIST farany dia tsy maintsy mikatsaka ny fahamarinana maharitra. Research lohahevitra ireo dia tsy maintsy ho maharitra sy tsy be loatra entin'ny tanjona fohy ezaka. Ny EEWS fandaharana niresaka olana lehibe eran-tany Angovo, Tontolo_iainana, Rano sy maharitra. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny maharitra-nandroahana ny fikarohana sy ny fampandrosoana, KAIST hitsangana ho ambony-echelon maneran-mpitarika ao amin'ny siansa sy ny teknolojia. Maharitra-entin'ny fikarohana be dia hivelatra eo ambany fampaherezana sy fanohanana. Matetika fikarohana vokatra dia refesina amin'ny fanondroana ny ambadika, fa tsy latsa-danja dia ny toetra iray nanome toky ny amin'ny faharesen-dahatra ary matoky.
Afaka hamelabelatra nanonona io hevitra io amin'ny alalan'ny ohatra ny Dr. Claude Shannon izay nanao fikarohana tao AT&T Bell Labs ary lasa mpampianatra ao amin'ny MIT. Namoaka kely, fa samy ny boky sy gazety dia ravaka. Hatramin'izao, ny vaovao ankapobeny teorian'ny dia mihatra. Mila manohana KAIST mba hanao fanomezana maharitra maro ny mitovy fakan-tahaka toa.
Fifthly, "T" dia ho an'ny Trust. KAIST dia tsy maintsy ho fikambanana izay natoky ny governemanta, ny mponina, ary ny ray aman-dreny ny mpianatra. Matokia no heverina ho sarobidy toy ny vola mafy.
Ny kolontsaina ny fitokisana atao azo atao amin'ny alalan'ny fahalalana sy ny fikarakarana ny hafa ny toe-javatra. Matokia Handray maharitra paka ao amin'ny toeram-pianarana ho toy ny ampahany amin'ny KAIST kolontsaina rehefa amin'ny sampam-pianarana, mpiasa sy ny mpianatra, rehetra mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina KAIST, Mihainoa, ka Fantaro maro samy hafa sy ny eritreritra hevitra hafa mihazona sy hizara ny zava-bita tsirairay sy ny tso-po arahabaina iray hafa. koa, rehefa Nanokan-tena ho amin 'ny faritra hanao ao amin'ny firenena sy ny ara-tsosialy ezaka eo amin'ny siansa sy ny teknolojia amin'ny avonavona sy ny fahatsapana ny andraikitra, dia indray ka aoreno tsara ny hatoky ny firenena sy ny vahoaka, ary koa ny fiaraha-monina maneran-, hazòny for KAIST. Ao amin'ny ambaratonga lehibe kokoa, isika koa dia mila ho itokisana fikambanana nitady rehefa maro mpampianatra sy ny mpianatra any ivelany. Miaraka izany fahatokiana izany ny naorina, KAIST nahazo diplaoma ary ny vahoakan 'Korea afaka mahita bebe fahafahana lehibe maneran.
To mamintina, KAIST dia tokony ho miavaka raha jerena ny fahalalana famoronana, mavitrika fandrosoana, mivadika, maharitra sy ny fahatokiana.
KAIST efa tonga eo amin'ny toerana tahaka ny oniversite ny eran ekena amin'ny fo manontolo amin'ny alalan'ny fanohanana ny vahoakan'i Korea. Aho hahatakatra fa nitarika KAIST hiaraka ny daharana 'izao tontolo izao-mpitarika oniversite naniry ny fiaraha-monina amin'ny alalan'ny fiovana mitohy sy ny zava-baovao no hany dalana izy hiverina ny fitiavana sy fanohanana avy amin'ny firenena, izay ny tena ny asa fitoriana aho dia niantso ny handray tahaka ahy notokanana ho KAIST fiadidian'ny.
voninahitra vahiny, fianakaviany sy ny namany, Te fanamarihana amin'ny iray monja, fa manan-danja kokoa zavatra alohan'ny manodidina ny teniko.
Last, fa tsy ny kely indrindra, Te hiarahaba ny Kilasy 2017 noho ny zava-bita. Nandresy masiaka ianao fifaninanana ho tonga KAIST, ary efa niaritra alalan'ny fanamby henjana mba hahatratra io teboka. Na dia mety ho Nandrotidrotika alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra ny hisoratra anarana eto, nofidinao amim-pahendrena. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana KAIST dia hanao ny tsara indrindra mba hahazoana antoka ny hoavinao fahombiazana rehefa mifindra any an-dafin'i ireo rindrina. Ny varavarana misokatra be foana ho anao ny hitsidika, ary Izaho hanao Tonga soa eto foana sy manome lanja ny fanontaniana, fandinihana sy ny soso-kevitra.
akoho mahakasika ny fanabeazana sy ny tari-dalana amin'ny ankapobeny, Masìna ianao, dia matokia fa KAIST mpampianatra sy ny fanohanana ireo mpiasa eto ho an'ny mpianatra sy ny fampianarana tsara indrindra.
kilasy 2017, anie ny fahombiazana amin'ny KAIST sy tany an-dafin'i ho andriamby mba hisarihana bebe kokoa ny mpianatra sekoly ambony manan-talenta ny siansa sy ny injeniera fanabeazana. KAIST mpampianatra dia ny modely, ary mety ho lava ny fiainanao-mpanoro hevitra sy ny mpanazatra.
manokana, na dia efa mihoatra noho 40 taona ny diplaoma avy any Berkeley, ny vadiko aho ka handeha hamangy ny mpampianatra any Berkeley, Mpampianatra Leon Chua sy Ernest Kuh, hankafy sakafo miaraka ary akaiky resadresaka amin'ny lafim-piainana maro. Vao tamin'ity volana ity, izy ireo no faly nandre ny fitokanana ho KAIST Filoha ary nanome faniriana tsara indrindra ho an'ny andraikitra vaovao ao amin'ny KAIST.
Ry manan-kaja vahiny, Misaotra anareo aho noho maha eto androany mba hanamarihana ny fiandohan'ny toko vaovao ity ao amin'ny KAIST. Mino amim-pahatsorana aho, ary mangataka fa ny fanohanana dia hanohy ny hampandroso KAIST sy soa antsika rehetra, ny firenentsika, sy izao tontolo izao.
College ny Natural Science
Department of Fizika
Department of matematika Sciences
Nahazo diplaoma Sekolin'ny Nanoscience & teknolojia
Department of biolojika Sciences
Departemantan'ny Fitsaboana sy Engineering
College ny Engineering
School ny Mechanical, Aerospace sy Systems Engineering
Mechanical Department of Engineering
Mpahay siansa, Department of Engineering
Nahazo diplaoma Sekoly Ocean Systems Engineering
Sekolin'ny elektrika Engineering
Nahazo diplaoma Sekoly Web Siansa sy ny Teknolojia
Nahazo diplaoma Sekolin'ny Information Security
Department of Bio & atidoha Engineering
Departemantan'ny Industrial sy ireo rafitra Engineering
Sampan-draharaha simika sy Biomolecular Engineering
Fitaovana Departemantan'ny Siansa sy Engineering
Departemantan'ny Nokleary sy atsangana hitondra Engineering
Departemantan'ny Fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana Engineering
Ny Cho Chun Shik Graduate School for Green Fitaterana
Department of Service Knowledge Engineering
Nahazo diplaoma Sekolin'ny EEWS (Energy, Tontolo_iainana, rano, ary maharitra)
College ny Liberaly Zavakanto sy Convergence Science
Departemantan'ny Humanities sy ny Siansa Sosialy
Nahazo diplaoma Sekoly Kolontsaina Teknolojia
Department of Business sy ny Teknolojia Management
Nahazo diplaoma Sekolin'ny Future Strategy
Nahazo diplaoma Sekoly Siansa sy ny Teknolojia Policy
Graduate School ny Fampahalalam-baovao & Media Management
Nahazo diplaoma Sekolin'ny Green Fitomboana
Ny institiota dia naorina tao 1971 tahaka ny Korea Advanced Institute ny Science (Kais) amin'ny alalan'ny findramam-bola amin'ny US $ 6 tapitrisa (US $ 34 tapitrisa 2014) avy any Etazonia ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena misahana (USAID) ary tohanan'ny Filoha Park Chung-hee[ Ny institiota fianarana ny rafitra dia tena natao ny Frederick E. Terman, filoha lefitry Stanford University, ary Chung Geum-mo, mpampianatra ao amin'ny oniversité sahady Institution ny Brooklyn. Ny institiota ny asa lehibe roa ireo mba hampiofanana ny mpahay siansa sy ny injeniera mandroso sy hampivelatra ny rafitry ny diplaoma ny fanabeazana ao amin'ny firenena. Research fampianarana nanomboka tamin'ny 1973 ary undergraduates Nianatra diplaoma ho an'ny mari-pahaizana licence amin'ny 1984.
In 1981 ny governemanta Koreana natambatra ny Advanced Institute of Siansa sy ny Koreana Institute of Siansa sy ny Teknolojia (KIST) mba hamorona ny Korea Advanced Institute of Siansa sy ny Teknolojia, na KAIST. Noho ny fikarohana samy hafa filôzôfia, KIST sy KAIST nizara in 1989. Tamin'ny taona io ihany KAIST sy ny Korea Sekoly Momba ny Teknolojia (Kit) mitambatra ary nifindra avy any Seoul ho any amin'ny Daedeok Science Town inDaejeon. Ny asa voalohany Filoha Suh teo amin'ny fitokanana in Jolay 2006 dia ny hametraka ny KAIST Development Plan. Ny 'KAIST Development dimy taona Plan' izany dia nofaranana tamin'ny Febroary 5, 2007 ny KAIST komity mpitantana. Ny tanjon'ny KAIST navelan'i Suh dia ho iray amin'ireo tsara indrindra siansa sy ny teknolojia oniversite eto amin'izao tontolo izao, ary ho tonga iray amin'ireo ambony-10 anjerimanontolo amin'ny alalan'ny 2011. Tamin'ny volana Janoary 2008, ny oniversite nandatsaka ny anarany feno, Korea Advanced Institute Siansa sy ny Teknolojia, ary nanova ny anarany ihany ofisialy KAIST.
Ianao ve mila miresaka momba KAIST ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
KAIST ao amin'ny Map
Photos: KAIST ofisialy Facebook
Miaraha mba hiresahana ny KAIST.
Other oniversite in Korea Atsimo
Update University Suweon
Ny University of Suwon Hwaseong